Dr. Myat Htut Nyunt – Healthy Life Journal
Dr. Myat Htut Nyunt
Posts By Dr. Myat Htut Nyunt
ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွှန့် မှဖြေကြားသည်။ မေး.ကျွန်မအသက်က ၃၅နှစ်ပါ၊ အရင်က သွေးတွင်း အဆီများလို့ ဆေးသောက်ဖူးပါတယ်။ အခုတလော အသက်ရှူရကျပ်နေလို့ အဲဒါ နှလုံးရောဂါဖြစ်မှာ စိုးလို့ပါ။ မေမေက နှလုံးကြီးပြီးဆုံးသွားတော့ မေမေ့လိုဖြစ်မှာ ကြောက်ပါတယ်ဆရာ၊ နှလုံးမကြီးအောင် ဘယ်လို ကာကွယ်သင့်ပါသလဲ၊ အခုကျွန်မဖြစ်နေတာက...
မျိုးဥကြွေမယ့်နေ့လေး သိချင်လို့ပါ . . .
မေး ။ ရာသီလာတာက ၇ ရက်နေ့ပါ။ ၁၀ရက်နေ့ ပြီးပါတယ်။ လတိုင်း အဲဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ စက် တင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့မှာ ရာသီလာပြီး ၁၃ရက်နေ့ မှာပြီးပါတယ်။ အခု အောက်တိုဘာလကျတော့ ၇ရက် နေ့မှာ ရာသီလာပြီး ၁၀ ရက်နေ့မှာ...
ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်လား. . .
မေး. ကျွန်တော့်ချစ်သူနဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ ၂၆ရက်နေ့က ပထမဦးဆုံး ဆက်ဆံမိပါတယ်။ တစ်မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်ပါပဲ။ ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်လား သိချင်လို့ပါ။ သူဓမ္မတာလာတာ ၅ရက်နေ့ကနေ ၈ရက်နေ့အထိပါ။ ULV (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ရက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်တဲ့ရက်ထက် နည်းနည်းကျော်နေတယ်ဆိုပေမယ့် ယတိပြတ်ပြောရခက်ပါတယ်။ ရက်တွက်ရတဲ့နည်းဟာလည်း...
မိုးအေးလည်း ခေါင်းချွေးထွက်တယ် . . .
ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် မှ ဖြေကြားပေးပါသည် Q. သားက မိုးအေးလည်း ခေါင်းက ချွေးအမြဲထွက်တယ်၊ စိုးရိမ်ရလားဆရာ။ Kokhank (Fb) A. ခေါင်းချွေးထွက်တာ သက်သာစေဖို့ ရေများများ သောက်ပါ။ အဟာရပြည့်ဝတဲ့ အသီးအနှံ၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များများစားပါ။ အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပါ။ အ၀မလွန်ပါစေနဲ့။...
အသည်းရောဂါရှိသူ ကိုယ်လက်နာ၊ ခေါင်းကိုက်ရင် . . .
မေး။ ။ ကျွန်တော့်အမေ အသည်းနည်းနည်းခြောက်ပြီး ဗိုက်ရေဖျင်းအနည်းရှိပါတယ်။ ဆေးရုံတက်ပြီး ဆင်း လာတဲ့လူနာပါ။ ဆရာဝန်က အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး မသောက်ရဘူးလို့ ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမေက ပြန်လာကတည်းက ကိုယ်လက်နာ၊ ခေါင်းကိုက်ဖြစ်ရင် ဘာဆေးသောက်သုံး သင့်ပါသလဲဗျာ။ ဆရာဝန် ဆေးခန်းရက်ချိန်းကလည်းမရောက်သေးလို့ အခက်တွေ့နေလို့ပါဗျာ။...
ရာသီလာစဉ် ကိုက်ခဲနာကျင်တယ် . . .
ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ဖြေကြားသည်။ မေး။ ။ ရေမြေခြားမှာရောက်ရှိနေတဲ့ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် ညီမလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အားကိုးစွာ မေးပါရစေရှင်။ ညီမလေးဟာ ဓမ္မတာလာကာနီးအချိန်တိုင်း ကိုက်ခဲနာကျင်တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားရတဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ယခုတစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ် အတွင်းမှာ...
ဆီးချိုမရှိသူ ဆီးချိုသကြားသုံးရင် . . .
မေး. ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါမရှိတဲ့လူက ရိုးရိုးသကြားမသုံးဘဲ ဆီးချိုသမားတွေသုံးတဲ့ သကြားသုံးရင် ဘာအန္တရာယ်များရှိနိုင်မလဲခင်ဗျာ။ အငယ်ကြီး (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ဆီးချိုမရှိဘဲ ဆီးချိုသမားတွေစားတဲ့ သကြားစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့အချိုခဲအမျိုးအစားတွေဟာ သဘာဝအတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲ ဓာတုနည်းနဲ့ စီမံထားတာမျိုးဆိုရင် ရေရှည်မှာမကောင်းပါ။ (Healthy...
ကလေးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အခါ . . .
မေး ။ တစ်ခုလောက် မေးချင်လို့ပါရှင့်။ ကျွန်မသမီးကို ၂လမှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးတော့ ဆရာဝန်က PCV မထိုးပေးလိုက်ဘူးရှင့်။ အဲဒါ ၄လမှ ပေါင်းထိုးလို့ ရတာလား။ အခု ၂လမှာ မထိုးဘဲနေလို့ရလားရှင့်။ Yu Yu Wai (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်...
ဆေးသောက်ပြီး ASO မကျဘဲတက်နေခြင်း
မေး ။ Pen V 250mg သောက်ရမယ်လို့ ဆရာဝန်က ဆေးညွှန်းရေးပေးလိုက်တာ ဆေးဆိုင်မှာ မရှိတာနဲ့ ဆေးဆိုင်က ပေးတဲ့ Pen V ၅သိန်းအားမှီဝဲလိုက်ပါတယ်။ တစ်နှစ်ရှိပါပြီ။ မသက်သာဘဲ ASO တက်နေ ပါတယ်။ ဘာဖြစ်နိုင်ပါသလဲ ဆရာ။...